Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ọ bụ Zombie Apọkalips Na Horizon?
O mechara mee, apocalypse zombie dị ebe a! Ndụ dị ka anyị maara na ọ na-achọ ịgbanwe ruo mgbe ebighị ebi! Enweghị ihe ngosi TV ọzọ, enweghị egwuregwu vidiyo, enweghị Twitter ọzọ!?! Kedu ka anyị ga-esi dị ndụ!? Chere naanị nkeji ole na ole, gịnị ka anyị ga-eri?! Enweghị nri ngwa ngwa ọzọ, ụlọ ahịa kọfị enweghịzi, ọnweghị ngwa nnyefe nri a na-achọ na enweghị ụlọ ahịa nri? Kedu ihe anyị ga-eme n'ụwa?
Ozi ọma ahụ bụ na isiokwu a abụghị eziokwu. Akụkọ ọjọọ ahụ bụ na ị kwadobeghị. Ma lee anya n'akụkụ na-egbuke egbuke. Key To Life Supply dị ebe a iji nyere aka! Anyị nwere ike ịkwado gị, ezinụlọ gị, ndị enyi gị na ọbụna agbataobi gị maka nke a. Site n'ịmụta itolite nri nke gị, mee ka ụmụ gị na-eri nri dị mma, nke ọhụrụ ị na-emepụta ma soro ndị agbata obi gị na-ekesa na ịzụ ahịa nri ahụ, anyị niile nwere ike ịlanarị apocalypse zombie! Ọ dabara nke ọma, ịzụlite nri nke gị bụ ihe na-atọ ụtọ, dị mfe karịa ka ị chere, obere ọrụ karịa ka ị chere, na ịkwesighi ịme ya naanị gị! Ezinụlọ na-enyefe ndụ nwere ihe niile ị chọrọ. Site na netwọk mmekọrịta anyị na ndị ọrụ nkuzi anyị nwere nkà, anyị nwere ike igosi gị otu esi eto mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri n'ụba.
N'elu nke, na-eto eto organically na-amụta ụfọdụ mfe compoting usoro na gị osisi mkpofu, ị nwere ike wughachi ala na-aghọ ọbụna obere dabere na fatịlaịza. Ogige gị ga-eto nke ukwuu na ala eweghachitere iji nyere ihe ọkụkụ aka ito eto nke ọma. Site na ịkparịta ụka n'Ịntanet na obodo gị, onye ọ bụla nwere ike ilekwasị anya n'ịzụlite ihe dịtụ iche ka anyị ka na-abanye n'ụdị dị ụtọ. Ịchịkọta ihe dị mfe, mkpọ, ịkpọ nkụ na ịchekwa nri nke ọma ga-eme ka obodo ahụ na-aga n'ihu na-eme nke ọma, ọbụlagodi n'oge oyi kachasị njọ.
Yabụ na ị hụrụ, ọ nweghị ihe ga-echegbu onwe gị! Ọbụlagodi na ụwa ga-aghọ mkpọmkpọ ebe, ị gaghị echegbu onwe gị maka iri nri nkịta mebiela oge ndụ gị niile. Gị na ndị obodo gị nwere ike iri nri dị ka ndị eze n'ihi na ị nwetala nkà na ihe ọmụma dị mkpa iji nye ihe kachasị mfe nke mkpa mmadụ, nri dị ụtọ. Ozi ọma ahụ bụ, ọbụlagodi na apocalypse zombie anaghị amịpụta, ugbu a ị nwere ike ibelata akara ụkwụ carbon gị, bie ndụ nke ọma, wulite usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ siri ike site na iri nri pesticide na kemịkalụ, na-abawanye uru ihe onwunwe gị na nye obodo gị netwọk nke inwe afọ ojuju. Anyị na-agba gị ume ka ị mee nzọụkwụ mbụ wee kpọtụrụ anyị na Key To Life Supply tupu oge agafee!